Nimcooyinka silica iyo dhimashada, Kaniisada Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Markaan qorayo khadadkaan, waxaan u diyaar garoobaa inaan aaska aaska adeer u tago. Muddo yar ayuu xumeynayay. Xukunka caanka ah ee Benjamin Franklin ayaa caan ka ah: “Waxaan hubnaa oo keliya laba shay adduunkan: dhimashada iyo cashuurta.” Waxaa iga luma dad badan oo muhiim ah noloshayda; oo ay ku jiraan aabbahay. Wali waxaan xasuustaa inaan ku booqday cisbitaalka. Wuxuu ku jiray xanuun aad u daran mana adkeyn karin inaan arko isaga oo silicaas ku jira. Waxay ahayd markii ugu dambeysay ee aan arko isagoo nool. Weli waan murugaysanahay maanta oo aanan haysan aabe soo waca oo waqti la qaata maalinta Aabaha. Weli, waxaan Ilaah ugu mahad naqayaa nimcada aan ka helnay dhimashadiisa. Tanina naxariistiisa iyo naxariistiisa waxay u noqonaysaa mid ay wada heli karaan dadka iyo noolaha oo dhan. Markii Aadan iyo Xaawa dembaabeen, Ilaah baa ka horjoogsaday inay cunaan geedkii nolosha. Wuxuu doonayay inay dhintaan, laakiin waa maxay sababta? Jawaabtu waa tan: haddii ay kusii cunaan geedka nolosha xitaa in kastoo ay dembaabeen, weligood waxay ku noolaan lahaayeen nolol dembi iyo cudur weligiis ah. Haddii, sida aabbahay oo kale, ay qabeen cudurka beerka, waxay ku noolaan doonaan xannuun iyo jirro weligood. Hadday kansar qabaan, weligood way xanuunsan doonaan iyada oo aan lahayn wax rajo ah maxaa yeelay kansarku ma dili doono. Ilaah wuxuu inagu siiyay geeri nimco si aynu maalin uun uga baxsanno xanuunka adduunka. Dhimashadu ma ahayn ciqaabta dembiga, laakiin hadiyad u horseedda nolosha dhabta ah.
“Laakiin Ilaah waa naxariis badan yahay, oo aad buu noo jeclaaday, markii Masiixu ka sara kiciyey kuwii dhintay, wuxuu ina siiyey annagoo ku dhintay dembiyadeenna cusub oo Masiixa ku dhex jira. Waxaa lagu badbaadiyay nimcada Ilaah oo keliya! Maxaa yeelay innaga oo Masiixa ah baa innaga sara kiciyey kuwii dhintay innaguna waxaynu qayb ka nahay boqortooyadiisa jannada la leh Ciise. (Efesos 2,4: 6; Nolosha Cusub. Baybalka).
Ciise wuxuu u yimid dunida sidii bini-aadamka inuu dadka ka xoreeyo xabsiga dhimashada. Markuu qabriga galay, wuxuu ku biiray qof kasta oo weligiis noolaa weligiisna wuu dhiman doonaa. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd qorshihiisa inuu ka soo kaco qabriga qof walba. Bawlos wuxuu u sharaxayaa sidan oo kale: "Hadda haddii aad Masiixa la tihiin Masiix, haddaba fiiri waxa kor ku yaal, meeshii Masiixu joogo, isagoo fadhiya midigta Ilaah" (Kolosay 3,1).
Waxaa naloo sheegay in silica adduunka ka sii xumaado markii aan dembaabno. Ilaah wuxuu gaabinaa cimriga dadka, waxay ku leedahay Bilowgii: "Markaa Rabbigu wuxuu yidhi: Ruuxaygu mar walba kuma xukumi karo binu-aadmiga, maxaa yeelay binu-aadmi waa jidh. Waxaan rabaa inaan isaga siiyo boqol iyo labaatan sano inta cimrigiisa ah ” (Bilowgii 1:6,3). Sabuurradii ayaa tiri sida Muuse uga cawday xaaladda bini aadamka sannado ka dib: Cadhadaadu aad bay noogu culus tahay nolosheena, Sida sawaxanimada oo kale. Waxaa laga yaabaa inaan ku nool nahay toddobaatan sano, laga yaabee xitaa siddeetan - laakiin xitaa sannadaha ugu fiican waa shaqo adag! Sidee dhakhso wax walbaa ay u dhamaadeen anaguna ma ahan ” (Sabuurradii 90,9f; GN). Dembigu wuu kordhay oo cimriga dadku wuxuu ka yaraaday 120 sano, sida lagu soo sheegay Bilowgii, illaa da 'qoto dheer. Dembigu waa sida kansarka oo kale. Habka kaliya ee wax ku oolka ah ee lagula tacaali karo waa in la burburiyo. Dhimashadu waa natiijada dembiga. Sidaa daraadeed Ciise wuxuu qaatay dembiyadeenna geeridiisa, oo isagu dembiyadeenii ayuu iskutallaabta ku qodbay. Geeridiisa waxaan ku aragnay dawada looguna talagalay dembiga, jacaylkiisuna waa nimcada nolosha. Xadhiga geeridu meesha kuma jiro maxaa yeelay Ciise wuu dhintay wuuna soo sara kacay.
Dhimashada iyo sarakicidda Masiixa awgood, waxaan si kalsooni leh u sugeynaa sarakicidda asxaabtiisa. "Maxaa yeelay, sida dhammaantood ay ugu dhintaan Aadan, kulligood waxay ku noolaan doonaan Masiixa" (1 Korintos 15,22). Imaatinka noloshaani wuxuu leeyahay saameyn yaab leh: “Oo Ilaahna indhahooda ilmo kasta wuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashaduna mar dambe ma jiri doonto, oo xanuun iyo murug midna ma leh. maxaa yeelay kii hore wuu dhaafay ” (Muujintii 21,4). Sarakicidda kuwii dhintay ka dib, dhimashada ma sii jiri doonto! Rajadaas darteed, Bawlos wuxuu u qorayaa Tesaloniika inaysan u barooran sida kuwa aan rajo lahayn: “Walaalayaalow, dooni mayno inaannu kaa tagno oo shaki ku gallo kuwa ku dhintay, si aydnaan u murugoon kuwa kale. oo aan rajo lahayn. Maxaa yeelay haddii aan rumeysan nahay in Ciise dhintay oo uu haddana soo sara kacay, Ilaah sidoo kale wuxuu ku hoggaamin doonaa kuwa isaga la seexday Ciise xagga Ciise. Sababta oo ah waxaan erey kaaga sheegnay xagga Rabbiga inaan annagu ku nool nahay oo ku sii nagaanno ilaa imaatinka Rabbigu kama filayo kuwa dhintay. (1 Tesaloniika 4,13: 15).
Ka bogsashada xanuunka
In kasta oo aan u murugoonayno luminta ehelka iyo saaxiibbada maxaa yeelay waan u gafnaa, waxaan rajeyneynaa inaan mar labaad ku arki doonno jannada. Waxay lamid tahay inaad salaamo saaxiib saaxiib aado dibada aado. Geeridu ma aha dhamaadka. Waa nimco inaga inaga xoreysa xanuunka. Markuu Ciise soo laabto, ma jiro dhimasho, xanuun iyo murugo midna. Waxaan uga mahadcelin karnaa nimcada dhimashada markay qof la jecel yahay dhinto. Laakiin ka waran dadka ay tahay inay muddo dheer xanuunsadaan ka hor inta aan dib loogu celin gurigooda weligood ah? Maxaysan weli u awoodin inay la kulmaan nimcada dhimashada? Ilaah miyuu ka tegey? Dabcan maya! Weligiis naga tagi maayo ama quusan doono. Silica sidoo kale waa nimco ka timid xagga Eebbe. Ciise, oo ah Ilaah, wuxuu ku xanuunsaday xannuunka ahaanshaha bini-aadamka muddo soddon sano ah - oo leh xaddidooyinkiisa oo dhan iyo jirrabaaddaha. Dhibaatadii ugu xumeyd ee soo gaartey wuxuu ahaa dhimashadiisa iskutallaabta.
Kaqeybqaad nolosha Ciise
Masiixiyiin badan ma oga in silica uu yahay barako. Xanuunka iyo silica ayaa ah nimco, maxaa yeelay iyaga ayaynu qayb ku leenahay nolosha xanuunka badan ee Ciise: “Haddeer waxaan ku faraxsanahay silica aan kuu qabo oo aan jidhkayga ku bixiyo wixii ka dhiman silica Masiixa ee jirkiisa , kani waa kaniisadda ” (Kolosay 1,24).
Butros wuu fahmay doorka silica uu ka ciyaarayo nolosha Masiixiyiinta: “Markuu Masiixu jidhka ku xanuunsaday, isku xidho isla macnaha; maxaa yeelay, kii ku xanuunsaday jidhka ayaa ku joojiyey dembiga " (1 Butros 4,1). Aragtida Bawlos ee silica ayaa la mid ah tii Butros. Bawlos wuxuu u arkaa silica waxa uu yahay: nimco ay tahay inaan ku faraxno. "Mahad waxaa iska leh Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, oo ah Aabbaha Naxariista iyo Ilaaha gargaarka oo dhan, kan noo wada qalbi qaboojiya dhibaatooyinkayaga oo dhan, si aannu annaguna ugu dhiirrigelino kuwa ku dhibaataysan cayn kasta, iyo raaxada aan nafteenna ku raaxaysanno. waxay ka yimaadeen xagga Ilaah. Waayo, sida xanuunsigii Masiixu uu noogu batay, Masiixuna aad buu noogu dhiirrigeliyey. If But, it But But Laakiin haddaynu dhibaataysan nahay waxay idiin noqon doontaa raaxadaada iyo badbaadadaada. Haddaan haysanno qalbiqaboojis, waxay noqon doontaa gargaarkiinna, taas oo waxtari doonta haddii aad samir u yeelataan isla dhibaatooyinkaas aannu annaguna xanuunsanno. (2 Korintos 1,3: 6).
Waa muhiim in la arko silica oo dhan sida uu Butros u qeexayo. Wuxuu ina xusuusinayaa in markaynu la kulanno xanuun iyo silica aan sabab lahayn, aynnu la wadaagno dhibaatada Ciise. Sababtoo ah waa nimco marka qof u adkaysto xumaanta damiirka xagga Ilaah hortiisa oo xaqdarro lagu arko. Maxaa yeelay caannimo noocee ah markii lagu garaaco ficilada xun oo samir yeelo? If But for for But But But But But But But But But But But But But But But But But But But But But But But for Laakiin haddii aad silic ficil wanaagsan sameysid oo aad adkaysatid, waa nimco xagga Ilaah ah. Maxaa yeelay, kanu waa wixii laydiinku yeedhay inaad yeelo, maxaa yeelay, Masiix baa idiin xanuunsaday, oo masaal baad u daysaan inaad ku daydaan raadkiisa. (1 Butros 2,19: 21).
Waxaan ku faraxsanahay nimcada Eebbe ee xanuunka, silica iyo dhimashada. Sida Ayuub, waxaan sidoo kale ognahay in markaan aragno bini-aadamnimada, si xaqdarro ah u la kulmayo jirro iyo silica, inaannaan Allah ka tagin, laakiin aan is-taagno oo aan ku faraxno.
Markaad weydiisato Eebbe dhibaatadaada inuu kaa qaado, Eebbe wuxuu kaa doonayaa inaad hubsato raaxada uu leeyahay: "nimcadaydu ha kugu filnaato" (2 Korintos 12,9). Waxaad dadka kale u noqon kartaa ku-qalbi qabooji raaxada ay la soo kulmeen.